‘कस्मेटिक सर्जरी’ गर्ने साेचमा हुनुहन्छ ? यी कुरा जान्ने कि ! – Everest Dainik – News from Nepal
एजेन्सी, साउन २ ।
ब्राजिलमा एक जना महिला आफ्नो हिपको प्लास्टिक सर्जरी गर्न नाम चलेको सर्जन (डाक्टर) कोमा गइन । सर्जरी सुरु भयो । सर्जनले एउटा सुई सगाए । त्यसको केही समयपछि ती ४६ वर्ष महिलाको मृत्यु भयो । अहिले ती डाक्टर फरार छ ।
फरार ४५ सालका डेनिस फ्रूटाडो रियो द जेनेरियो सहरमा सेलिब्रिटी डाक्टर मानिन्छन, जसलाई डा. बमबमको नामले समेत चिनिन्छन् । आज भोलि ‘राम्रो’ बन्ने होडबाजीमा शरिरका विभिन्न भागको प्लास्टिक सर्जरी गराउने फेशन नै चलेको छ ।
सन् २०१६ मा बीबीसीले गरेको एउटा अध्ययनले ३२ प्रतिशत महिलाले आफ्नो विभिन्न अंग ब्रेस्ट, ओठ, नाम, हिपको कस्मेटिक सर्जरी गर्न चाहेको तत्य सार्वजनिक गरेको थियो । यसमा ३२ वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाको संख्या ४५ प्रतिशत थियो ।
ब्रिटिश एसोसिएशन अफ अस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन्सको आँकडा अनुसार, प्लास्टिक सर्जरी गर्नेको संस्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ । ‘राम्री’ हुने होडमा यसका नकारात्मक असरहरुबारेमा धरैले इक्कार गर्छन् । प्लास्टिक सर्जरीमा सिलिकनको प्रयोग गरि अंग बढाउने, खटाउने वा आकर्षक बनाउने गरिन्छ ।
मानिसको संवेदनशील अंगमा प्रयोग गरिने सिलिकन उद्योग तथा कलकारखानामा प्रयोग गरिन्छ । यो तथ्य सार्वजनिक भएपछि बेलायतमा नियन्त्रणको माग उठेको थियो ।
ब्रिटिश एसोसिएशन अफ अस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन्सका पूर्वअध्यक्ष राजीव ग्रोवरले कस्मेटिक सर्जरी केही रुपमा सफल भएपनि ग्लामर देखिन सर्जरी गर्ने बढ्दो ट्रेन गतल भएको स्वीकार्छन् । उनले सर्जरी गर्नुभन्दा पहिला यसका सकारात्मक तथा नकारात्मक असरका बारेमा राम्रोसँग परिचित हुनु पर्ने सल्लाह दिन्छन् ।
यी कुरामा सजक बनाैं
कस्मेटिक सर्जरी गर्ने डाक्टर वा सर्जनको योग्यता परिक्षण गर्ने,
यसमा लाग्ने सम्पूण रकमका बारेमा जानकारी लिने,
आफुले चाहेको परिणाम आउँछ कि आउँदैन भन्ने जानकारी राख्ने,
यसमा भएका जोखिमको आँकलन गर्ने